घिउकुमारी पा’यल्सको बिरामीको लागि अचम्मको फाइदा, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग । पूरा पढी सेयर गरौ !
शिक्षा र स्वास्थ
पा’यल्स रो’गका बि’रामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अ’वस्थामा छन् । दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रो’गको जोखिम झन बढ्ने चि’कित्सकहरु बताउँछन् । क’ब्जियत नै पा’यल्सको मुल कारण हो । जब क’ब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका र’क्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ । पा’यल्सका कारण म’लद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ ।
पा’यल्स रो’ग निको पार्ने केही घरेलु विधि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी विधि अपनाउँदा पा’यल्स हुन नदिन र पा’यल्स भएकाहरुलाई निको पार्न उपयोगी सिद्ध हुनेछ । पा’यल्स भएका विरामीहरुका लागि घ्यू’कुमारी अचुक औषधी हो । पा’यल्स भएमा विस्तारै घि’उकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रो’गन पनि लगाउन सकिन्छ।
एक दिनमा ३–४ पटक म’लद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ । काँचो केरा उसिनेर बिहान–बेलुका खाँदा पनि पा’यल्स रो’गीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पा’यल्सका रो’गीले तारेको/भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन । क’ब्जियत हुन नदिन रे’सा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ । अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पा’यल्सका विरामीहरुका लागि आराम मिल्छ । मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पा’यल्सका रो’गीलाई फाइदा हुन्छ ।
आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। दिसा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास ल’क्षण हो । मलाशयमा भारीपन हुने, दि’सा राम्रोसँग नहुने, दु’ख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् । जति जति रो’ग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ । गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ । क’ब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ । किनभने अपच हुने खाने कुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्या’केटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा क’ब्जियतको कारण बन्छ ।
अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ । जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राती अबेर खाने, आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने बानीले क’ब्जियत रो’ग पैदा गर्छ । त्यस्तै दिसा रोक्ने बानी अर्को कारण हो । स्व’स्थ्य खानपान र जीवनशैलीले यस्तो समस्या निवारण गर्न सकिन्छ । पा’यल्सको समस्या छ भने चाहि त्यसको प्रकृति अर्थात श्रेणी अनुसार उपचार विधि अपनाउनु पर्छ ।
सामन्य स्थितिमा खान पान, जीवन शैली, व्या’याम आदिबाट यसको निदान खोज्न सकिन्छ । पा’यल्स भएको अवस्थामा बो’सोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मा’सुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड ड्रीकं आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । म’दिरापान, धु’म्रपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ ।
प्रे’सर लो भ’यो ? अपनाउनु’स् यी घरे’लु उ’पाय ! र’क्तचाप अचानक न्यून भएमा यसले श’रीरका विभिन्न अंगमा हानि पुर्‍याउन सक्छ। प्रे’सर लो भएको महसुस भएमा के गर्ने ? अपनाउनुस् यी उपायः नु’नपानी खाने: नुनमा सोडियम पाइन्छ, जसले ब्ल’ड प्रे’सर बढाउन मद्दत गर्छ। प्रे’सर लो भएमा एक ग्लास पानीमा डेढ चम्चा नुन हालेर पिउनुपर्छ।
किसमिस: प्रे’सर लो भएमा किसमिस खानु पनि लाभदायक हुन्छ । प्रे’सर लो भइरहन्छ भने राति केही किसमिस भिजाएर भोलिपल्ट बिहान भिजेको किसमिस र त्यसको पानी खाने गर्नुपर्छ। तुलसी: तुलसीमा भिटामिन-सी, पोटासियम, म्याग्नेसियमजस्ता तत्व पाइन्छन्। प्रेसर लो भएमा १०-१५ वटा तुलसीका पत्ता जुसमा हालेर त्यसमा एक चम्चा मह हाली पिउने गर्नुपर्छ। कागती पानी: कागती पानीले उच्च र न्यून र’क्तचाप दुवैमा लाभ गर्छ ।
प्रेसर लो भएमा कागती पानीमा अलिकति नुन र चिनी हालेर पिउनुपर्छ । अब नि’न्द्रा नला’गे, यस्ता घ’रेलु उपा’य अ’पनाउनुहोस् ! पुग्छ , त्यस्ता व्यक्तीको अनुहारमा समेत चमक आउने चि’कित्सकको भनाई छ । तर हरेक मानिसको जिवन सोचे जस्तो हुँदैन । चाहेर पनि मस्त निदाउन सक्दैनन् । लामो समय सम्म ओछ्यानमा पल्टिदानी निन्द्रा पर्दैन ।
यसरी लामो समय सम्म निन्द्रा नलागेमा हाम्रो शरीरको कि’ड्नी र मु’टुमा सोझै असर गर्छं । तनाव बढ्ने , टाउको दुख्ने डि’प्रेसनको समस्या आउछ । ब’ल्ड प्रेसर बढ्छ । मोटोपन बढ्छ । सु’गर बड्छ । जसको लागी हामीले दैनिक ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । यदि निन्द्रा लाग्ने औषधी सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरको कि’ड्रनीमा असर गर्छ । यस्तो समस्याबाट मुक्त पाउन यस्ता घरेलु विधि अपानाउन सकिन्छ । यसो गर्दा निनभए डाक्टरको सल्लाह पनि लिनुपर्छ ।
१. प्रसस्त समय घाम ताप्नुहोस् जसले थकान महसुस गराउछ र राती निन्द्रा लाग्दछ, साथै घामबाट प्रसस्त मात्रामा भिटामिन डि पाइन्छ । २. दैनिक व्यायम गर्ने , हिडडुल गर्ने । चाडै सुत्ने र चाडै उढ्ने बानी बसाल्ने । ३. बेलुका ४ बजे पछि चिया ,कफी एनर्जी ड्रिक तथा पिय पर्दाथ खान छोड्नुहोस् । यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याफिन पाइन्छ । एक सय ग्राम कोफिनमा ४० मिलि ग्राम क्याफिन पाइन्छ । त्यसले निन्द्रा भगाउने काम गर्दछ ।
५. राती चाडै ओछ्यानमा जाने बानी बसाल्नुहोस् जसले निन्द्रा लाग्न मद्धत गर्छ । ६. सुत्ने समय एउटै बनाउनुहोस् । जसले गर्दा हाम्रो मष्तिस्कलाई सुत्ने र उढ्ने समय थाहा पाउछ । ७. बेलुकी सधैं मुख धुने , दाँत माज्ने बानी बसाल्ने , सुत्दा सधैं आफुलाई उपयोगी किताब पढ्ने बानी बसाल्ने ।
८. आफु सुत्ने ओछ्रयान सधैं सफा चिटिक्क पारे राख्ने बानी बसाल्नुहोस् । ९.सुत्ने बेलामा मष्तिस्कलाई कुनै पनि तनाव नदिने , सुत्ने बेलामा कहिल्यै मसलेदार खाना खानु हुँदैन । मसलेदार खानाले शरीरलाई हिट दिन्छ र पाचन तन्त्र पनि रात भरी सक्रिय गराइदिन्छ । १०.सुत्नु भन्दा १ घण्टा अगाडी दुधमा अलिकती जाइफलको धुलो हालेर खानुहोस् । यसको अलवा दालचिनीको धुलो राखेर दुधमा खादा नि गहिरो निन्द्रा लाग्दछ । २० ग्राम जाइफल प्रयोग गरियो भने यसले ३६ घण्टा सम्म निन्द्रा लाग्छ । पाचन किड््रनीको लागी राम्रो गर्छ ।
११. सुत्ने बेलामा केरा खाने गर्नुहोस् । केरामा पोटासियम , म्याग्नेसियम , भिटामिन बी ‘6’ पाइने गर्छ ।१२. पुदिनाको अचार, चिया खाने । १३.सेतो चना खाने , यसमा पोटासियम पाइन्छ ।१४.हरियो सागसब्जी खाने, चिल्लो रहित दही खाने । १५ सुत्ने बेलामा किबी फल, बदान ५-६ खाने । १६.मह खाने यसले मष्तिस्कमा रहेको सेरेटोनिकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्दछ ।
१७ सुने बेलामा सधै. शरीरलाई राम्ररी मालिस गर्नै बानि बसाल्नुहोस् । तर सबैलाई ८ घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन ,कोही ५ घण्टा सुतेर नि स्र्फुत हुन सक्छन् । यदि कसैलाई डि’पे्रसन छ भने डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको औषधि सेवन गर्नुपर्दछ ।
Previous स्वादमा तितो तर उपयोगी करेला, हेर्नुहोस् यति धेरै रहेछन् फाइदाहरु ।
Next बर्गरभन्दा बढी स्वस्थ हुन्छ समोसा, यस्ता छन् कारणहरु…हेर्नुहोस् ।